जापानको देउराली पञ्चेबाजा समुहले पठायो ढोरपाटनका बाढि पहिरो पिडितलाई सहयोग - Gulminews
जापानको देउराली पञ्चेबाजा समुहले पठायो ढोरपाटनका बाढि पहिरो पिडितलाई सहयोग
२०७७ पुष २७, २२:१४
बागलुङ, २७ पुष । देउराली पञ्चेबाजा समुह टोकियो जापानले आज एक कार्यक्रमका विच ढोरपाटनका बाढि पहिरो पिडितको लागि सहयोग गरेको छ । जापानमा गलकोट नगरपालिका वडा नं. ११ फलाटेका चन्द्र बहादुर पुनको संयोजकत्वमा संकलन गरिएको ८४ हजार रकम आज एक कार्यक्रमको अबसरमा नगरपालिकाको केन्द्र बुर्तिवाङमा नगर प्रमुख देब कुमार नेपालीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
पञ्चेबाजा समुहका १४ जनाबाट संकलन गरिएको उक्त रकम हस्तान्तरण हर्दै गलकोट नगरपालिका वडा नंं. ११ का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर श्रीसले दुःखको बेला प्रवासीले गरेको सहयोग स्रर्हानिय भएको बताए । त्यस्तै ढोरपाटन नगरका नगर प्रमुख नेपालीले समुहले गरेको सहयोगले पुन निर्माण कोषमा थप सहयोग पुगेको बताउदै समुहलाई धन्यवाद समेत दिए ।
टोकियो जापानमा सन २०११ मा स्थापना भएको पञ्चेबाजा समुहले विभिन्न विपतको समयमा सहयोग गर्दै आएको समुहका सदस्य पुनले बताए । ढोरपाटनमा यहि भदौ १७ गते आएको बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएका ३८ जनामध्ये २२ जनाको शव फेला परेको थियो भने एक जना सकुशल भेटिएका थिए । बाढीपहिरोका कारण ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नं ६, ७, ८ र ९ का १३० घरमा क्षति पुगेको तथ्याङ्क नगरपालिकासँग छ ।